dhibaatooyin JAILBREAK iPhone: Haddii aad u samayn mise maya?
Si JAILBREAK aad iPhone waa mid caadi ah maalmahan sida ay galinaysaa qolka si ka badan u fursadaha weyn. Isla mar ahaantaa, inkastoo, si JAILBREAK aad iPhone waxay keeni kartaa in ay dhibaatooyin fara badan iyo sidoo kale. Halkan liiska sababaha ugu fiican sharaxaad ka bixisay sababta ay u JAILBREAK aad iPhone karaa ama waxaa laga yaabaa in ay wanaagsan fikrad ma noqon.
Faa'iidooyinka jailbreaking aad iPhone
• Helitaanka shabakadaha kale - Mid ka mid ah walaac hoose la iPhone waa in qalabka yimaado bixiyaha adeegga kaliya hal suuqyada qaar, tusaale ahaan USA, AT & T haystay oo dhan xuquuqda ka badan iPhone muddo dheer. Jailbreaking aad iPhone xaaladan oo kale ha karaan in aad isticmaasho qalabka la shabakadaha kale sidoo kale si wanaagsan; ku siinaya xoriyadda aadka loogu baahan yahay ee ay awoodaan in ay go'aan ka oo waa in bixiyaha adeegga.
• barnaamijyadooda badan oo dheeraad ah oo jailbroken iPhone - App Store inkastoo ayaa ka yimaadeen meel fog la fara-ada cusub lagu daray bil kasta, si kastaba ha ahaatee la qalab jailbroken, ayaad u helaan tiro badan oo ah barnaamijyadooda cusub oo hal abuur leh. Tusaale ahaan, aad jailbroken iPhone, waxa aad heli kartaa oo ay isticmaalaan Cydia, xarun ka mid ah si loo yaqaan 'barnaamijyadooda sharci darrada ah' in aadan helin on App Store haddii kale.
• Waa mid aad u fudud in la sameeyo - jailbreaking aad iPhone waa quruxsan fudud iyo wax la samayn karaa quruxsan si deg deg ah; uma baahnid inaad software kasta oo ay u soo bixi ama wax. Waxaad buuxin kartaa nidaamka oo dhan la qasabno yar oo isticmaalaya browser web kaga badiyeen xiriir wanaagsan WiFi in dhowr daqiiqo.
• habka buuxda u qaban - Haa, waa dhab! Hadiiba ay dhacdo aadan jeclaan waayo-aragnimo ee aad jailbroken iPhone oo aad rabto inaad ka saarto JAILBREAK ah, waxaad si fudud u leeyihiin in ay ku xidhmaan aad telefoon si aad u computer iyo isticmaali shaqada laga heli karaa Lugood soo celiyo si loo soo celiyo si ay goobaha aad iPhone ka hor jailbreaking.
Qasaarooyinka jailbreaking aad iPhone
• Waxaad ku dhammaan karaan inay la telefoonka bricked - 'Bricking' had iyo jeer waa halis ah marka aad samaynayso qaar ka mid ah faragalin halis ah oo aad iPhone oo ka bixi karaan qalabka si buuxda u isticmaali karin. Waxaad mar walba cawradooda biyaha kartaa iPhone wada nadiifsan yahay in kiiska noocan oo kale ah oo loo soo celiyo si ay functional mar kale, laakiin si kastaba ha ahaatee 'Bricking' waa ka kaaftoomi weyn oo ah in aad jeclaan lahaa inuu ka fogaado.
• Ma jirto damaanad dheeraad ah - jailbreaking aad iPhone dhab ahaan ka tirtiri doonaa damaanad aad iPhone iyo waxa taas macneheedu yahay in Apple mar dambe ma dabooli doono mid ka mid ah magdhow ah ama arrimo kale oo la qalab - taas oo ka biyodiiday weyn iyo mid ka mid ah in ay u noqon karto oo qaali ah mustaqbalka fog.
• Dhiqlaha More - jailbroken iPhone A hadda lama socday si aad u hesho updates rasmi Apple, taasoo ku sii nugul in cayayaanka iyo arrimaha kale ee la xidhiidha. Waxaad ugu dambeyntii laga yaabaa u jeeda badan oo ka mid ah arrimaha la daadiyo cusub iwm
• La Dhimay Security - Tani waa la yaab leh ma sida jailbreaking, aad aadka u yihiin furitaanka albaabada u haakarisku si ay u awoodaan inay ku beeri malwares dheeraad ah iyo in sidoo kale si joogta ah u rogtid oo aad iPhone.
Marka aad JAILBREAK waa in aad iPhone
Sidaas, sida loo go'aamiyo haddii aad diyaar u tahay inay JAILBREAK aad iPhone iyo haddii aad waa u samayn mise maya? Waa hagaag, haddii aad leedahay aqoonta si qoto dheer farsamo ee waxa la sameeyo leh telefoonka jailbroken iyo sida loo maareeyo arrimaha ku timaadda oo kale oo aad haysato sabab gaar ah si ay u helaan Chine in ay yihiin maqan on iPhone, tusaale ahaan, aad rabto in aad isticmaali karaa Facetime video chat ma ahan oo keliya in ka badan WiFi laakiin sidoo kale 3G, markaas jailbreaking waxaa loogu talagalay adiga.
Sida loo JAILBREAK iPhone 5
Sida loo JAILBREAK 5c iPhone
> Resource > jailbreak > dhibaatooyin JAILBREAK iPhone: Haddii aad u samayn mise maya?